मार्च २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2018 / मार्च
प्रकाशित मार्च 30, 2018 मार्च 30, 2018
Inrico T320 Hamradio अवधारणा द्वारा समीक्षा
हम्रिडिओ कन्स्याटसेप्सले निर्मित Inrico T320 मा पूर्ण भिडियो समीक्षा हेर्नुहोस्।
सामान्यको रूपमा, एरिकले T320 को अद्भुत गहन विश्लेषण गर्दछ र कसरी यसलाई विभिन्न नयाँ डिजिटल मोडहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
भिडियो हेर यहाँ.
प्रकाशित मार्च 27, 2018 मार्च 27, 2018
TM7 WiFi र GSM बाह्य एन्टेना मोड
टीएम on मा वाइफाइ समस्या भएकाका लागि; यो फोटो म्यानुअल हो जुन मेरो एक राम्रो साथीले बनायो। म चित्रमा टे टेक्स्ट अनुवाद गर्न सक्दो राम्रो गर्न सक्नेछौं। खराब स for्केतको कारण सरल छ: एन्टेना भित्र मात्र जडान भएको छैन।
१ - टेप र प्लास्टिक हटाउनुहोस्। पछि तपाईले सम्पूर्ण मदरबोर्ड देख्नुहुनेछ।
२ - प्लास्टिक र टेप जुन हटाउन आवश्यक छ।
- - टेप हटाउँदा सावधान हुनुहोस्। कनेक्टर सजिलै बिग्रन सक्छ।
- - मदरबोर्ड चिमटाउन तयार छ।
5 - GSM, Wifi र GPS (बाह्यमा जडित)
6 - एन्टेना र कनेक्टर को अन्त।
7 - तपाईले कनेक्टर स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुनेछ कि हामी बोर्डमा GSM वा wifi कनेक्टरमा जडान गर्नेछौं।
8 - TM7 सँग आन्तरिक GSM एंटेना देखिन्छ। बाहिरको जडान GSM मा जडान गरिएको छैन।
9 - TM7 सँग आन्तरिक वाइफाइ एन्टेना देखिन्छ। बाहिरी डि डि कनेक्टर स्पष्टसँग वाइफाइको लागि होईन।
10 - तपाईंसँग अब २ सम्भावनाहरू छन्:
१- जीएसएम बाह्य
कसरी तपाइँ उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दै तपाइँ के जडान गर्ने भनेर छनौट गर्नुपर्नेछ।
11 - यस अवस्थामा हामीले वाईफाई कनेक्ट गर्न छनौट गर्‍यौं। तपाईं पछि सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
क्रेडिट: यो फोटो रिपोर्ट मार्सेल गोडेमान्सद्वारा बनाइएको र फिलिप इभेरर्टद्वारा अनुवाद गरिएको हो
OK7NWO द्वारा Inrico TM-8 मा एक आन्तरिक ब्याट्री र GPS थप्नुहोस्
आन्तरिक ब्याट्री परिमार्जन
धेरै व्यक्तिहरू म सहित गुनासो गरिरहेका छन्, कि आधुनिक कारहरूमा १२ वी आपूर्तिले TM12 लाई आपूर्ति काट्छ जब इग्निशन बन्द छ। म उत्सर्जन र राजनीतिक शुद्धतालाई दोष दिन्छु। ईटको लागि अटो स्टप स्टार्ट बटन जस्तो बिट।
म यस ब्याट्रीको मुद्दाबाट थकित भएको छु, किनकि TM7 बुट गर्न सुस्त छ र निष्पक्षताका साथ मैले सामना गर्नु पर्ने सब भन्दा छिटो एन्ड्रोइड होईन।
एक साथीले सुझाव दिए कि १18650 a० कोषहरू एक नजर लायकको छ, मैले महसुस गरेन कि तिनीहरू सबै ठाउँमा vaping उपकरणहरू र ल्यापटप ब्याट्री प्याकहरू प्रयोग गर्दछन्। मलाई LithIon ब्याट्री संग कुनै अनुभव छैन को रूप मा मलाई केहि डर थियो यो नराम्रो रुपमा गलत जान जान्छ।
निर्माण कार्यमा जीवन अलि सजिलो बनाउनको लागि मैले solder००mA सान्यो सेलहरूलाई धातु सल्डर ट्यागहरूको साथ आदेश दिएँ।
मैले यो पनि महसुस गरें कि लिथियोन ब्याट्रीहरूलाई उचित चार्जर सर्किट चाहिन्छ। त्यो राम्रोसँग चिनिएको नीलामी साइटमा ट्रल गरिएको गर्दा मैले तपाईं २,2,3,4,5,6,,,,4,, सेल चार्जर सर्कीटहरू पाउन सक्दछु। मैले निर्णय गरे cells कोषहरू सायद मलाई चाहिने भन्दा बढी थियो तर मसँग टीएम room भित्र कोठा थियो, त्यसैले यो cells कोषहरू थिए। साथै, मैले १7वी स्विच गर्न सकिने A ए पावर सप्लाई पाएँ जसले चार्जिंग गर्न सक्दछ।
आईडीले एसडी कार्ड स्थापना गर्न TM7 खोलेको छ, त्यसैले मलाई पहिले के थाहा छ त्यो बोर्डमा ती2तौलहरू हटाउनु थियो। यसले दुबै छेउमा २x १ 2० कोषहरूको लागि पर्याप्त कोठा बनाउँदछ।
बोर्डको साथ प्रदान गरिएको रेखाचित्रका अनुसार तिनीहरूलाई तार दिएपछि (यो कुनै पनि हुन सक्छ, त्यहाँ निर्दिष्ट गर्न धेरै धेरै छन्) र निश्चित गरियो कि सबै कुरा ध्रुवीयताका मामलामा सही थियो, र इन्सुलेटेड पनि। मैले ब्याट्री वरिपरि घुमाउन रोक्न केसको पछाडि केही फोम राखें। यसले तिनीहरूलाई सुरक्षित पनि राख्छ। बोर्डबाट डीसी आउटपुट मैले प्याराबीलको अन्डरआईएसडमा प्लस र माइनस सम्बन्धित ट्र्याकहरूमा जाँदा सोराडेड गरें।
जहाँसम्म, म सुझाव दिन्छु कि फ्यूज फिट हुनुपर्दछ र एउटा पनि तपाई पछाडि माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै एक होल्डरमा, वा कम्तिमा एउटा इनलाइन फ्यूज केही छोटो वा केही भएमा। मैले हातमा डेस्कमा केही नभएकोले मसँग छैन। एक टगल स्विच पनि उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाईं एन्ड्रोइड क्र्यास गर्न व्यवस्थित गर्नुभयो र तपाईंलाई युनिट पूर्ण रूपमा पावर आवाश्यक पर्दछ। तपाईं वास्तवमै पुन: खोल्न चाहनुहुन्न र फेरि यो काम पछि तारहरू हटाउनुहोस्।
म 8 घण्टा सम्म चार्ज गर्छु र शाब्दिक २ h घण्टा पूर्ण प्रयोगको साथ अन्त हुन्छ। मेरो अभिप्राय कारमा 24 घण्टा थियो, तर यसको क्षमता भन्दा बढी मैले क्षमताको सर्तमा आवश्यक पार गरें। मेरो अनुमानमा cell सेल व्यवस्था सम्भवतः काम गर्दछ। केवल सहि चार्जर पीसीबी पाउनुहोस्।
हाल, टिएम7ले १m० एमए तस्विरमा खडा गर्दछ र अधिकतम २130० एमए, यो वास्तविक दृष्टिमा सानो हुन्छ यो ठूलो बाकसमा केवल एक टेलिफोनको रूपमा। त्यसो भए, १240० कोषहरू थोरै ओभरकिल हो तर यसले काम गर्दछ।
GPS आन्तरिक एन्टेना परिमार्जन
कारमा केबुलहरूसँग मेरो सहिष्णुताको कमीको कारणले मैले GPS7 मोड्युल TMXNUMX राख्ने निर्णय गरे।
त्यसैले gps एन्टेना च्यात्नु भन्दा पहिले मैले यो घर भित्र कसरी काम गर्ने भनेर जाँच गरें। कुनै अचम्म छैन यो ठीक थियो, त्यसैले त्यो मेरो ट्रिगर थियो। जीपीएस एन्टेना प्लास्टिक केस गरिएको छ त्यसैले एक धारदार ब्लेड र एक पियाली केस खोल्न को लागी प्रयोग गरिएको थियो। यसको तीखो र भंगुर छ कि वर्कशप वरिपरि उड्न प्लास्टिकको बिटको आशा।
यसलाई निकालेपछि, मैले or वा inches इन्च कोक्स केबललाई अनुमति दिएँ र यसलाई काटें। मलाई जे भए पनि सबै अतिरिक्त लम्बाइ चाहिन्छ।
सतह माउन्टको लागि एक सुपर ठीक सोल्डरिंग फलाम प्रयोग गर्नुहोस्, कारण कुनै कोक्स छैन, तर TM7 मा सकेट प्राप्त गर्न गाह्रो छ र जडानको लागि केन्द्र पिन ट्याप गर्न एकदम थोरै क्लीयरन्स छ। यसको लागि सोણી गर्न को लागी सजीलो ब्रेन छ। पीसीबीबाट आउने असम्भव पातलो कोक्सका कारण हामीसँग अरू कुनै विकल्प छैन, त्यसैले म प्रयास गर्दै यसलाई काट्ने कोशिश गरिरहेको थिइनँ र यसलाई खोलेर त्यस बाटोमा जान्छु। सकेट हटाउनुहोस् र सोल्डिंग अनौंठो छ किनकि यसलाई समात्न वाइज वा क्ल्याममा राख्नुहोस्।, मैले यसलाई कुनै पनि हालतमा जडान भयो र मैले एन्टिना स्नुग राखेको छु जुन मैले पहिले नै फिट गरेको ब्याट्रीमा आन्तरिक ब्याक केसको दायाँ तिर।
कार भित्र सिग्नल ड्रप उपेक्षित छ र म यो गियर बक्स र सीट बीच shoved छ। ड्यासमा संकेत भरिएको छ।
आफ्नै जोखिममा गर्नुहोस्। यदि केहि गल्ति भयो वा आगोमा आदि म कुनै जिम्मेवारी स्वीकार्दिनँ। म सुझाव दिन्छु कि यी मोडहरू सुरक्षा र सामान्य जोखिमको सर्तमा केही सुधार गर्न सकिन्छ। यी एक एक बाहिर परीक्षण रूपमा बाहिर आएका थिए, म चाहान्छु निर्माताले खरिदमा एक विकल्पको रूपमा वास्तवमै यी गर्दछन्। यसो गर्नु आवश्यक र निराशाको बाहिर थियो।
प्रकाशित मार्च 26, 2018 मार्च 26, 2018
२०१ Amateur मा एमेच्योर रेडियोको वास्तविकता
पृथ्वीमा सबैभन्दा ठूलो शौक के हो? अब एक प्रश्न छ!
तपाईं धेरैलाई यो लेख पढ्नेहरूको लागि, उत्तर स्पष्ट हुनेछ - एमेच्योर रेडियो। यो यस्तो रुचि हो जुन खुशी, उत्तेजित र कहिलेकाँहि समान उपायहरूमा विफल हुन्छ!
तर यो पनि एक शौक हो कि ऐतिहासिक रुपमा प्रविधिको सिमाना धकेल्यो - र प्राय: जसो प्रश्नहरू कसैले पनि सोधेको सोचेका थिएनन्।
मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि हाम्रो शौकको इतिहासले उनीहरूको दिनको नियामक प्राधिकरणहरूले भर्खरै हामीलाई “बेकार” मान्ने ब्यान्डहरूमा पहुँच पुर्‍याउँछ र त्यसपछि हेर्दा हेर्दा उनीहरूसँग कस्तो विशाल मूल्य हुन्छ - हजुर, ज्यादै पनी " लाइन अफ-दृश्य "ब्यान्ड।
आज यो थोरै विडम्बनाको कुरा हो कि विश्वव्यापी रूपमा व्यावासायिक हिसाबले सबैभन्दा मांगमा रहेको स्पेक्ट्रम भनेको VHF / UHF र माइक्रोवेभ हो, जुन २० औं शताब्दीमा भेट्टाउने सबैभन्दा “रेखाको रेखा” हो।
यहाँ युके मा, यो स्पेक्ट्रम को ठूलो भाग लगातार निरन्तर जिगिंग भइरहेको छ र पछि उच्च बोलीकर्ताहरु लाई "बेचिन्छ" (यस्तो चीज हो जसले मलाई व्यक्तिगत तवरले अलि बढी अश्‍लीलको रूपमा हेरेको छ, तर त्यो अर्को कथा हो ...)
वास्तविकता यद्यपि २०१ 2018 मा दिन प्रति दिनको आधारमा हम्सको बहुमतको लागि यति रोमाञ्चक छैन।
मैले अर्को दिन १ 160० मिटरमा स्विच गरें र ब्यान्डमा S9 हल्लाको सामना गर्नुपर्‍यो। यो S5 मात्र केही वर्ष पहिले थियो। म स्पष्ट रूपमा भाग्यमानी छु - धेरै व्यक्ति S9 + २०dB वा धेरै शोर पाइरहेका छन्, धेरै ब्यान्डहरूमा ...
हेम्सको रूपमा, हामी हरेक दिन स्थानीय हस्तक्षेपबाट चुनौतीहरूको सामना गर्दछौं; पावर-लाइन एडेप्टर, विदेशबाट आयात गरिएको गैर अनुरूप उपकरणहरू, हिसी राउटरहरू, हल्ला घर उपकरणहरू, बिजुली आपूर्ति र सबै अन्य तरिका इलेक्ट्रॉनिक ह्यास। यो कुनै राम्रो हुँदै गरेको जस्तो देखिदैन ...
त्यसोभए हामीसँग होम ओनर एसोसियसनहरू नयाँ प्रतिबन्धात्मक करारहरूसँग मिलेर छन् जसले हामीलाई एन्टेनाहरू राख्न रोक्दछ, चाहे यो meter० मिटर लामो तार वा foot० फिट अग्लो धरहरा हो। हामीसँग छिमेकीहरू आँखाहरूका बारे गुनासो छ र सडकमा "त्यो रेडियो ह्याम" बाट हस्तक्षेपको बारेमा।
We एन्टेना मस्तुल सौन्दर्यको कुरा हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि हाम्रा अधिकांश छिमेकीहरू असहमत हुनेछन् - कहिलेकाँही, अत्यन्त लज्जास्पद रूपमा, आफ्नै XYLs द्वारा नेतृत्व गरिएको!
धेरैका लागि पोर्टेबल अपरेशनले यसबाट केही उम्कन प्रस्ताव गर्दछ, तर सबैजना QRP गियरको साथ पहाडमा चढ्न र SOTA खेल्न प्रेरणा पाउँदैनन्, जे भए पनि धेरै प्रशंसनीय छ।
यदि हामीसँग मात्र हाम रेडियो प्ले गर्न सक्दछौं भने उचित मौसम र यात्रामा सीमित छ भने, हामीमध्ये अधिकांश रेडियोको बर्षमा गइरहेका हुँदैनौं जुन वर्षका धेरै दिनहरू हुन्, हामी हौं?
कम से कम मोबाइल अपरेशनले यहाँ मद्दत गर्दछ र अवसरहरू मा हामी मध्ये धेरैको लागि दिन बचत गरेको छ।
त्यसो भए हामी यस तथ्यको साथ संघर्ष गर्दछौं कि हामी अनुचित, सहि वा गलत रूपमा बुझेका छौं, पुरानो जमानाको, फड्डी-डड्डी र टच अफ-टचको रूपमा।
जब तपाइँ हेम्सले संचारको इतिहासमा के योगदान पुर्‍याउँछ विचार गर्नुहोस्, यो विडम्बनाको उचाई हो।
वास्तवमा धेरै व्यक्तिहरू, जसले वास्तवमै आधुनिक समयका सञ्चारहरू पत्ता लगाए र सिद्ध बनाए, जुन स्कूलकीड्सदेखि लिएर सबै सरकारहरूमा निर्भर छन्, अब 78 XNUMX बजेको शेलक डिस्क जत्तिकै पुरानो जमानाको रूपमा बदनाम भएका छन्!
के हामीले भर्खरै छोडिदिन्छौं?
त्यसोभए शौकमा जारी राख्नु भनेको के हो? धेरैले निर्णय गरे कि उनीहरूले गर्दैनन्!
शौक छोड्ने संख्याहरू, कमसेकम कम्तिमा पनि, बढ्दो देखिन्छ। म प्राय: विज्ञापनहरू अनलाइन देख्छु जहाँ पूर्ण स्टेशनहरू बिक्रीको लागि छन्, र जहाँ मालिकले "35 XNUMX बर्ष पछि छोडिदिने - धेरै शोर - ज्यादै धेरै समस्या ..." भन्दछन्।
अब तपाई कतै साँच्चिकै विद्युतीय हिसाबले शान्त रहनको लागि भाग्यवान हुनुहुनेछ - वा तपाईले ग्रामीण इलाकामा एउटा ठूलो फार्म वा कुटपिट गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ कम वा कुनै बिजुलीको आवाज छैन - तर हामी मध्ये धेरै जना सक्षम हुन गइरहेका छैनन्। त्यो गर।
के त्यहाँ कुनै भावना छ "यदि हामी त्यसलाई हराउन सक्दैनौं, तिनीहरूमा सामेल हुनुहोस्"?
के एउटा समाधान हम रेडियो लिन र यसलाई त्यस्तो दायरामा सार्नको लागि हो जुन हामी सायद चुपचाप तिरस्कार गर्दछौं र यद्यपि एकैचोटि लगभग पूजा गर्छौं? अनलाइन क्षेत्र?
मलाई यो अलि अनौंठो लाग्यो कि हम्सको रूपमा हामी इन्टरनेट र कम्प्युटरहरू अँगालेकोमा हामी औधी खुशी छौं - उदाहरणका लागि, सीडब्ल्यू-ईर्सले रिभर्स बीकन नेटवर्कको व्यापक उपयोग गर्दछ, डाटामोड उत्साहीहरूले PSK रिपोर्टर - DX जस्ता कार्यक्रमहरू अँगालेको छ। -उनीहरू आफ्नो मनपर्ने क्लस्टरमा भर पर्दछ, र यस्तै।
हामी सबैसँग हाम्रो मनपर्ने लगि software सफ्टवेयर छ, हाम्रो मनपर्ने प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमहरू र वेबसाइटहरू हामी बारम्बार गर्छौं, यदि यो विलाप मात्र हो भने पनि!
यो एकदम डरलाग्दो छ!
तर के हामी थोरै छौं? धेरै "सम्पूर्ण होगमा जान" आशंकित छ र यो पहिले नै वास्तवमा के हो भनेर इन्टरनेट स्वीकार्नुहोस्? एक मानव निर्मित वैकल्पिक विधि प्रचार? के यो एक कारण हो किन पूरै "नेटवर्क रेडियो" घटना बुझ्न कठिन छ?
एक प्रसिद्ध ब्रिटेन हेम (र यहाँ हाम्रा एक एमेच्योर म्यागजिनहरूका लागि नियमित लेखक) ले मलाई प्रशंसनीय ईमानदारीको साथ हालसालै लेख्नु भयो। उनले वर्णन गरे कि उनी इन्टरनेटको बारेमा प्रचारप्रसारको बारेमा सोच्दै संघर्ष गर्दै थिए, यद्यपि बौद्धिक रूपमा उसले देख्न सक्छ कि यो स्पष्ट छ!
ऊ वास्तवमा, सर्तमा आउन कोशिस गर्दै थियो (जसरी मैले सुरुमा गरें) जस्तोसुकै पनि समझ हाम्रो सिग्नलहरूको प्रचारको अर्को रूप रहेको हुन सक्छ, त्यो मानव निर्मित।
पछि उनी स्वीकार गर्न गए वास्तविक उसको लागि मुद्दा यो होइन कि यस प्रकारको प्रचारको अस्तित्व रहेको थियो, तर यो "सँधै" रहेको थियो। (निष्पक्ष हुन, यसले फरक बनाउँदछ!)
के यो कडा परिश्रम गर्नु पर्छ?
तर यसले मलाई पनि सोच्यो!
के हामी ह्याम रेडियोको "कडा मेहनत" जत्तिकै यस्तै बानी भएको छ कि यदि टेक्नोलोजीले प्रचार प्रसारको माध्यम सिर्जना गर्दछ जसले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँछ, हामी लगभग छ यो पूह-पूह गर्न?
त्यहाँ एक दृष्टिकोण मुद्दा को एक बिट छ? तपाईलाई कस्तो प्रकारको कुरा थाहा छ ... "मैले VP8G काम गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्‍यो, त्यसो भए किन तपाईं अझ सजिलोसँग गर्न सक्षम हुनुभयो? "
नयाँ खेल मैदान
२०१ In मा, हेम्समा उपलब्ध टेक्नोलोजीले हामीलाई नयाँ खेल मैदान (इन्टरनेट प्रसार) प्रदान गरेको छ - यो पुरानो खेल मैदान (आयनोस्फेरिक र ट्रोपोस्फेरिक प्रसार - जस्तो हो) भन्दा धेरै फरक छ, जुन हाम्रो मार्गमा अझै छ। - यो गएको छैन, हामी सक्छौं र गर्नुपर्छ अझै यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्!)
कसले भन्छ हामी दुबै खेल मैदानहरूमा एकैचोटि खेल्न सक्दैनौं? पक्कै पनि यो प्रसारको दुबै तरीकाहरूको प्रयोगयोग्य प्रयोगको मामला हो, यदि त्यस्तो चीजले तपाईंलाई खुशी पार्छ भने?
मानव स्वभावमा केहि छ जुन अरूले हामीसँग यो भन्दा सजिलो भएको मनपर्दैन, तर म एमेच्यर्सलाई शौकमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू स्वीकार गर्न र २१ औं शताब्दीका एमेचर्सको रुचिहरू भएको महसुस गरेर खुला भएको हेर्न चाहन्छु, हामी बाँचिरहेको समयको सद्गुण, मात्रै विभिन्न २० औं शताब्दी Amateurs को ती बाट।
त्यहाँ केहि गलत छैन - यो केवल यो हो के हो!
हामी कसैको लागि, नयाँ प्रविधिहरूको वरिपरि हाम्रो टाउको लिन गाह्रो छ, केवल हाम्रो इजाजत पत्र प्राप्त गर्न हामीले राख्नुपर्ने सबै कडा मेहनतको कारण। यो अब आंशिक बेमानीको रूपमा लिन सकिन्छ, एक पटक हामीले हाम्रो टाउको "प्रसारको माध्यमको रूपमा" इन्टरनेटको वरिपरि पाउँदा। सबै इन्टरनेट पछि सबैको लागि खुला छ…
हामी सबैको डिफेन्सिनेसीतर्फ झुकाव छ - यो आंशिक कारणले हो we अरूसँग नभएको कुरा छ - ह्याम लाइसेन्स।
तर फेरि, यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्दै, र अलि बढी देखाउँदा यसको अधिग्रहणको अर्थ यो छ कि हामीसँग (धेरै जसो) भवन र परीक्षण ट्रान्सीभरहरू (र सायद सीडब्ल्यूको केही ज्ञान) को बारे मा विशेषज्ञ ज्ञान छ।
के यी दिनहरू धेरै ह्यामहरूको लागि उच्च प्राथमिकता हो?
मलाई मन पर्छ कि आरएसजीबी अध्यक्ष निक हेनवुड जी R आरडब्ल्यूएफले गत अक्टुबरमा आफ्नो सोसाइटीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनेका थिए कि २० औं शताब्दी हेम्स समस्या समाधानका लागि मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल समाधानमा बढी रुचि राख्ने सम्भावना रहेको थियो, जबकि २१ औं शताब्दी हेम्सको सम्भावना बढी छ। सफ्टवेयरमा मुद्दाहरूको समाधान।
गत years० बर्ष वा सो भन्दा बढि शौकमा भएको परिवर्तनलाई हेर्ने यो एउटा चाखलाग्दो तरीका हो ...
यो सबै कहाँ जान्छ?
कसलाई थाँहा छ? के यो सबैभन्दा रमाईलो कुरा होइन र?
एसडीआर टेक्नोलोजीले एचएफलाई परिर्वतन गर्दै छ, कम्प्युटर टेक्नोलोजीले सीडब्ल्यू, डाटामोड र डीएक्स-इ ing्ग, (एफटी of को उदयलाई हेर्नुहोस्!) र आधुनिक संचार टेक्नोलोजी र यसको सहगत पूर्वाधारले हामीलाई अन्तिम परिवर्तन प्रदान गर्दै छ - एक वैकल्पिक माध्यम परिवर्तन गर्दैछ प्रसार को।
त्यसो भए RF का साथ रमाईलो गर्नुहोस् - सबै प्रकारका!
त्यसैले हो, अगाडि बढ्नुहोस् र ती नेटवर्क रेडियोहरूसँग खेल्नुहोस् जसले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछ - विश्वभरका ह्याम-मित्रहरू बनाउनुहोस्।
एक अर्कासँग कुराकानी गर्नुहोस्, सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्, डु An्गा एch्करहरू प्रयोग गर्नुहोस्, क्यूआरपी सीडब्ल्यू प्रयोग गर्नुहोस्, भल्भ रेडियो प्रयोग गर्नुहोस्, ठूलो एन्टेना प्रयोग गर्नुहोस्, इन्टरनेट जडित नोडहरू प्रयोग गर्नुहोस्, प्रतियोगितामा भाग लिनुहोस्, उपग्रहको माध्यमबाट काम गर्नुहोस्, D-STAR प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई जस्तो चाहानुहुन्छ!
यसको सबै रूपहरूमा आरएफसँग रमाईलो गर्नुहोस् - ह्याम ब्यान्ड, हो, तर सेलुलर ब्यान्ड, वाइफाइ ब्यान्ड र ब्लुटुथ ब्यान्डहरू - विशेष गरी यदि यसले तपाईंलाई खुशी दिन्छ!
आखिर, एक शौक अन्ततः हामीलाई खुशी पार्ने छैन?
सायद सबैभन्दा दुखलाग्दो "२०१ Amateur मा एमेच्योर रेडियोको वास्तविकता" यो हो कि, शौकमा केही व्यक्तिहरू सुन्न, यो मुख्य उद्देश्य वास्तवमा हम्सलाई सकेसम्म दयनीय बनाउनु हो भन्ने सोच्नको लागि तपाईंलाई माफ गर्न सकिन्छ!
चला प्रयोग गरौं सबै २०१ 2018 मा र यस भन्दा पछि हाम्रो लागि उपलब्ध अद्भुत प्रविधिहरू - सबै पछि, अर्को बर्ष सम्भवतः खेल मैदानमा अझ नयाँ नयाँ खेलौनाहरू हुनेछन्!
म, एक को लागी, कुर्नु सक्दैन!
म्यागजिनलाई तीन पत्र
आज "पोर्न पत्रिका" दिन थियो!
तपाईं रस निष्कर्षमा जानु भन्दा पहिले, यो प्रत्येक महिनाको मेरो पत्नीको दिनको वर्णन हो जब ग्रेट ब्रिटेनको मासिक पत्रिका 'रेडकॉम' को रेडियो सोसाइटीले हाम्रो ढोकामा हिट गर्दछ।
उनलाई थाहा छ कि म लेख र विज्ञापनहरु लाई ध्यान दिएर हेर्दै छु, शौचिया रेडियोको संसारमा नयाँ के छ भनेर हेर्न खोजीरहेकी छु।
यदि त्यहाँ नयाँ Icom 7610 XNUMX१० को एक चमकदार ग्लैमर फोटोहरू थिए भने ...… ओहो, हो!
आज, यो रेडियो उपकरणको नयाँ टुक्रा वा लेखनको एक विशेष अंश थिएन जुन मेरो ध्यान खिचेको थियो। आज म सम्पादकलाई पत्रका धागोद्वारा विशेष गरी "अन्तिम शब्द" स्तम्भ भनेर चिनिन्छु।
नयाँ टेक्नोलोजी र हाम्रो शौकमा यसको प्रभावको बारेमा व्यक्त गरिएको विचारहरूको एक विशेष सेट गरिएको छ। र यदि म इमान्दार छु भने, म आशा गर्छु कि म के पढिरहेको छु भनेर चिन्तित हुन कोही मात्र होइन।
संवाददाता नम्बर एकले एमेच्योर रेडियोको जादू सुनाईरहेको थियो र हाम्सको रूपमा हाम्रो संयुक्त जिम्मेवारी कसरी छ कि हाम्रो नम्बरहरू बढाउन अरूहरूसम्म पुग्न - सबै राम्रा सामानहरू।
तर उसले त्यसपछि भन्न मा गए र म उद्धृत "… अवश्य पनि युवाहरूसँग उनीहरूको आइपडहरू, आईपडहरू आईफोनहरू र त्यस्तै हुनेछन्, तर ती उपकरणहरूसँग त्यहाँ कुनै 'जादू' छैन"।
मलाई पक्का विश्वास छ कि लेखकले जब उनले यो लेख्छन् कसैलाई हावामा उडाउन कोशिस गरिरहेका छैनन् - यो केवल हाम्रो भन्दा कान्छो व्यक्तिको आँखा मार्फत पुरानो हेम्सको लागि संसारलाई हेर्नु कत्ति गाह्रो छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दछ।
तर हामी क्रूर ईमानदार हुन, निश्चित यो एक प्रतिनिधित्व गर्दछ विशाल २१ औं शताब्दीका मानिसहरू कहाँ छन् भन्ने गलतफहमी।
आजको जनसंख्याको% 99% बताउन प्रयास गर्नुहोस् कि उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा "जादू" छैन!
एक उपकरण जो टचस्क्रिन जेब कम्प्यूटर हो; केही वर्ष पहिले मात्र डेस्कटप पीसी भन्दा बढी शक्तिशाली एक उपकरण; एक उपकरण जसले तत्काल संचारलाई विश्वव्यापी एचडी लाइभ भिडियोको साथ अडियो र द्रुत मेसेजिंगको साथ अनुमति दिन्छ; यसमा तपाईंको पूरा संगीत लाइब्रेरी भण्डारण गर्न सक्षम एक उपकरण ...
गम्भीरतापूर्वक? त्यो जादु छैन? यो मलाई जादू जस्तो देखिन्छ! ग्लासको सानो स्लब जुन तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुने सञ्चार क्षेत्रमा लगभग केही पनि गर्दछ? वाह!
विन्डोज 3.1..१ याद छ?
हामीलाई oldies को लागी एक वास्तविकता जाँच गर्नुहोस्!
अधिकतम 30०s भन्दा कम विन्डोजमा "स्टार्ट" बटन अघि समय सम्झँदैन! (बस यो डुब्न दिनुहोस्!)
30० बर्ष भन्दा कम उमेरकोसँग रेडियोमा "ट्युनिंग नब" भनेको के हो भन्ने कुराको अवधारणा हुँदैन।
30० बर्ष भन्दा कम उमेरसँग ह्याम रेडियो वास्तवमा के हो, के गर्छ भनेर बुझ्दैन वा यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्दैन (र उनीहरूले मेरो अनुभवबाट पनि जान्न चाहेकोमा थोरै चासो देखाउँछन्!)
जहाँसम्म, 30० भन्दा कम उमेरकासँग कम्तिमा एउटा स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरको स्वामित्व हुन्छ र सम्भवतः थाहा छ यसमा केही स्तर कोडि do पनि कसरी गर्ने।
यसले हाम्रो शौकमा रुचि राख्ने नयाँ व्यक्तिहरूको विरुद्धमा हामी कार्यको स्तर देखाउँदछ। दुर्भाग्यवस, हामी बुझेका छौं, यदि यदि हामी वास्तवमा बुझेका छौं, पुरानो जमानाको रूपमा, मिति सकिएको र टाँस-आउट-टचको रूपमा।
तर यी केवल प्रतिक्रियाहरू थिएनन् जसले मलाई प्रभावशाली भन्दा कममा हिर्कायो।
अर्को लेखकले भने “... एमेच्योर रेडियो कम्युनिकेसन बिन्दु हो बिन्दु मा कुनै ठूलो पूर्वाधार संग, प्रिय वृद्ध आमा प्रकृति बाहेक! त्यो पूर्वाधार हटाउनुहोस् र ती सबै धेरै hyped अद्भुत उपकरणहरू धेरै इलेक्ट्रॉनिक स्क्र्याप हुनेछ! "
ठीक छ, म यो दावी तर्क गर्छु सबै ह्याम कम्मस पोइन्ट-टू-पोइन्ट हुन्, तर म लेखकले के भनिरहेको छु हेर्न सक्छु।
तर जब म वास्तवमै यसको बारेमा सोच्छु, २ 25 वा सो भन्दा लामो उमेरमा जुन मैले मोबाइल उपकरणको स्वामित्व लिएको छु, म एक पटक याद गर्न सक्दिन जब यो नेटवर्कसँग जडान थिएन।
गति र कभरेज दुवैको हिसाबले लाखौंले इन्टर्नेट र विशेष गरी यसमा मोबाइल पहुँच सुधार गर्न खर्च भएका छन्। हो यो बन्द गर्न सकिन्छ, हो यो द्वेषपूर्ण अभिप्रायको लागि जोखिमपूर्ण छ, तर। 99.9999! आवर्ती प्रतिशतको लागि, यसले काम गर्दछ!
मलाई लाग्दछ कि यी उपकरणहरूको "इलेक्ट्रोनिक स्क्र्याप" बन्ने बहुमूल्य सम्भावना छ, एक apocalyptic परिदृश्य बाहेक ...
यो संसारको अन्त्य हो ...
...जसले मलाई तेस्रो संवाददातामा ल्याउँछ।
उनले भविष्यवाणी गरे कि, आरमागेडोनको घटनामा, "सेलुलर फोन नेटवर्क, सोशल मिडिया, नगद मेशिन, स्थानीय अधिकारी, खाद्य आपूर्ति, विद्युत स्टेशन, पानी आपूर्ति, ग्यास र बिजुली र ईन्धन उत्पादन गर्नेहरू, सेना, पुलिस, आगो र एम्बुलेन्स सेवाहरू।" सबै बन्द हुनेछ।
उहाँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ "एमेच्योर रेडियो र रेयनेट त्यसपछि देशमै छाडिएका केहि बाँकी सञ्चार विधिहरूको हिस्सा बन्न सक्दछ।"
फेरि तपाई सतहमा असहमत हुन सक्नुहुन्न र मैले कुरा बुझेको छु।
तर वास्तवमा, यदि यी सबै उपकरणहरू र संगठनहरू एक apocalyptic घटनामा तल गएका छन् र यो आफ्नै लागि प्रत्येक व्यक्ति हो, मलाई लाग्दैन कि मेरो पहिलो विचार भनेको m० मीटर डिपोल बनाउने र मेरो EMP- सुरक्षित प्रयोग गरेर समय खर्च गर्नु हो।तपाईंले त्यो सोच्नुभएको थियो, हैन?) FT-817 म मानव जाति, जो पछाडि बाँच्न कोशिस गर्दै छन् केहि अन्य गरीब भोक भोक सदस्यहरु संग सम्पर्क बनाउन सक्छु कि भनेर हेर्नका लागि ...
म आशा गर्दछु कि पत्रका लेखकहरूले मलाई माफ गरिदिनेछन्, किनकि म "प्राप्त" गर्दा उनीहरू कहाँबाट आएका हुन्, तर मलाई वास्तवमै उनीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हराइरहेको महसुस गर्दछन्।
इन्टरनेट माध्यम छ
त्यो विन्दु यो छ कि २१ औं शताब्दीमा, हामीसँग प्रचारको नयाँ माध्यम छ जुन धेरैले गर्न सक्दछन् र गर्न सक्छन्, पहिले नै पहुँच छ (परीक्षा र विशेष अनुमतिपत्र बिना) - इन्टरनेट।
र यसलाई बेवास्ता गर्न वा यसलाई अझै बेवास्ता गर्न हामी बेवास्ता गर्ने छौं, यसलाई बेल्टटल गर्नुहोस् किनभने यो नयाँ हो, मानव-निर्मित हो र आयनोस्फीयर होइन जुन हामी सबैलाई यत्ति धेरै मन पर्छ!
आयनोस्फीयर एक शानदार प्राकृतिक संसाधन हो, यद्यपि अधिकांश शहरी सेटिंग्समा S9 हल्लाको साथ, यो दुर्भाग्यवस हामीले प्रयोग गर्ने तरिकामा अर्थपूर्ण सम्पर्कहरू बनाउन गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। यो मनपर्‍यो वा छैन, इन्टरनेट छनौटको २१ औं शताब्दी प्रचार माध्यम हो।
नेटवर्क रेडियोसँग के गर्ने यो?
यहाँ हामीसँग उपकरणहरू छन् जुन एक तरिकामा, सामान्य अर्थमा रेडियो होइन, तर त्यसले अझै पनि सञ्चार गर्न आरएफ प्रयोग गर्दछ। रेडियो जसले आयनोस्फीयर प्रयोग गर्दैन, तर प्रसारको यो नयाँ माध्यम, इन्टरनेट प्रयोग गर्दछ।
मलाई लाग्छ आजका अधिकांश मानिसहरू यी उपकरणहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्दछन् - तिनीहरू बुझ्न योग्यको रूपमा परिचित छन्, तर दुई-बाटो कुराकानीको आनन्दमा उनीहरूलाई परिचय दिन पर्याप्त फरक छ।
अर्को शब्दहरुमा, यो एक आम सम्भाव्य रेडियो संचार को रूप मा सम्भावित व्यावहारिक मार्ग हो, र विशेष गरी हाम रेडियो।
हो, केहि ह्याम लाइसेन्समा सम्पूर्ण रूपमा प्रगति हुन सक्दैन, तर केहि शायद र त्यो राम्रो चीज भएको छ - हामीले सुरु गर्नु पर्छ मानिसहरू कहाँ छन् र प्रविधिको साथ प्रत्येक दिन उनीहरू प्रयोग गर्छन्।
निस्सन्देह, हामी तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्न सक्दैनौं, सतहमा, संचार को एक "हीन" फार्म हुन, एक परीक्षा संगै, एक प्रवेश को एकमात्र माध्यम को रूप मा, अन्तमा, एक शौक?
मलाई डर छ कि हाम रेडियोको वर्तमान स्थितिले हाम्रो शौकको रूपमा हाम्रो विलुप्त हुन सक्छ (र्याडकमलाई तेस्रो पत्रका लेखकले भविष्यवाणी गरेको विश्वको अन्त हुनु अघि)।
हनी, म विश्व संकुचित!
वर्षौं पहिले, लामो दूरीको कुराकानी महँगो अपरेटर द्वारा राखिएको टेलिफोन कलहरू वा ह्याम रेडियोबाट मात्र सम्भव थियो। अहिल्यै होईन - मोबाइल इन्टरनेटले विश्वलाई संकुचित गर्यो र हाम रेडियोले २१ औं शताब्दीमा प्रासंगिक रहनको लागि आफैलाई पुन: परिभाषित गर्न आवश्यक छ। मलाई लाग्दैन कि मोबाइल उपकरणहरूमा कुनै "जादू" छैन भनेर सुझाव दिएर हामी हासिल गर्नेछौं!
वास्तवमा हामी अब केहि लिन सक्दैनौं - मानिससँग त्यस्तो कुनै "प्रसंग" छैन जसले उनीहरूलाई हेम रेडियो वास्तवमा के हो भनेर बुझ्न मद्दत पुर्‍याउँछ, त्यसैले हामी तिनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य तरिकाहरू पनि खोज्नुपर्दछ। उपकरणहरूसँग सुरूवात गर्न जुन उनीहरूसँग पहिले नै स्वाभाविक छ र तिनीहरूको जेबमा तिनीहरूसँग पक्कै पनि त्यो प्रासंगिक तरीका हो। नेटवर्क रेडियोहरू ठीक त्यस्तै प्रकारको उपकरण हो जुन त्यस चासोमा निर्माण गर्न सक्दछ।
एन्ड्रोइड ओएस प्रयोग गरेर, टच स्क्रिनको प्रयोग गरेर, उनीहरूले पहिले नै प्रयोग गरेको अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्षम, फोन, इन्टरनेट उपकरण हुन सक्षम, तर एमेच्योर-शैली संचारको लागि सेटअप, तिनीहरू केवल उत्तम हाइब्रिड उपकरण हुन सक्छ, वा कम्तिमा सुरुमा। यस्तो उपकरण तिरको विकास।
म सबै ह्याम्सलाई यो विषयको बारेमा खुला मन राख्न र नेटवर्क रेडियो घटनालाई हातबाट हटाउने आग्रह गर्दछु।
कहाँ जान्छ यो सबै, कहाँ जान्छ? तर यो धेरै डर भन्दा एक उज्जवल भविष्य हुन सक्छ ...
एनबी क्रिस आइतवार २ March मार्च २०१ 25 बिहान ११:०० बजे बर्मिंघम युके नजिकैको विथाल ह्याम्फेस्टमा नेटवर्क रेडियोमा प्रस्तुतीकरण गर्दैछ। सबै स्वागत छ।
प्रकाशित मार्च 7, 2018 मार्च 7, 2018
"यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन!" क्रिस G7DDN द्वारा
यो चित्रमा - Inrico TM-8
एक अग्रगामी पृष्ठभूमि
म भर्खरै एमेच्योर रेडियोको अद्भुत इतिहासमा ध्यान दिइरहेको थिएँ, स्पार्क ट्रान्समिटरको साथ शुरुआती अग्रगामीहरू र एट्लान्टिकमा पहिलो संकेतहरू प्राप्त गर्ने दौडमा, माइक्रोवेभ उत्साहीहरू जसले अन्तरिक्ष संचार र स्याटेलाइट टेक्नोलोजीको लागि अगाडि मार्ग विकसित गरेका थिए (र, फुसफुस यो, मोबाइल फोन टेक्नोलोजी!)
ह्याम रेडियो र आरएफ टेक्नोलोजीको इतिहास जोडै जोडिएको छ - बेलायतमा यहाँ एक समय यस्तो पनि आएको थियो कि विश्वास गरिएको थियो कि हाम रेडियोले तपाईंलाई बीबीसीमा काम पाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
यद्यपि परिवर्तन रेडियोको प्रारम्भिक इतिहासमा धेरै छिटो आयो। मार्कोनीको प्रयोगबाट पहिलो सार्वजनिक प्रसारण स्टेशनहरू २ 25 वा सो बर्ष मात्र थियो। टिभी केवल १ 15 बर्ष वा त्यो पछाडि भएको थियो, र त्यस्तै…
प्रतिरोध (वा "ओहम" मा महसुस गरेको छैन)
यद्यपि ह्याम रेडियोको इतिहास पनि एक हो प्रतिरोध परिवर्तन गर्न - अग्रगामीहरूबाट होईन, तिनीहरू प्रायः यसलाई उत्तेजित गर्दछन्, तर "दैनिक" ह्याम्सबाट आएका थिए।
मलाई हेरौं कि यदि म तिमीलाई केही उदाहरण दिन सक्छु, मेरो जिब्रोले मेरो गालामा एकदम दृढतापूर्वक लगाएको छ ...
"त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होइन!"
प्रारम्भिक हेम्सले सीडब्ल्यू धेरै विशेष रूपमा प्रयोग गर्‍यो। त्यसैले जब AM आवाज मोडको पहिलोको रूपमा आयो, त्यहाँ खैलाबैला मच्चियो ...“यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन! वास्तविक ह्याम रेडियोमा मोर्स कुञ्जी प्रयोग समावेश छ! के संसारमा के शौक आउँदै छ, प्रयोग गर्दै आवाज एयरवेभमा कुराकानी गर्न? यो त्याग हो! ”
तर जीवन चल्यो, एएमले स्वीकृति पायो र हेमल्याण्डमा फेरि एकपटक सबै ठीकठाक थियो।
त्यसोभए ट्रान्जिस्टर टेक्नोलोजी १ 1940 s० को दशकको अन्त र १ 1950 s० को दशकको शुरुमा आयो र यसले ठूलो प्रतिक्रिया जगायो। "एकछिन पर्ख! त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। वास्तविक ह्याम रेडियोहरू अन्धकारमा चम्किन्छ - हामीसँग यो लघु प्रविधि हुँदैन - ती कहिलेसम्म लामो भल्भ वा विश्वसनीय हुने छैनन्। ”
तर जीवन चल्यो, ठोस राज्य उपकरणहरू स्वीकार्य फेला पर्‍यो र सबै ह्यामल्यान्डमा फेरि राम्रो थियो।
त्यसपछि एसएसबी आइपुगे र त्यहाँ थियो अझ बढी असन्तुष्टि ... “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। वास्तविक ह्याम रेडियो डोनाल्ड डक जस्तो लाग्दैन! यो एक अद्भुत कुरा हो, यो चाँडै नै हट्नेछ जब मानिसहरूले यी मूर्ख आवाज सुन्न तर्सिएका हुन्छन् ”।
तर जीवन चल्यो, एसएसबीले स्वीकृति पायो र हेमल्याण्डमा फेरि सबै ठीक थियो।
त्यसपछि एफएम र रिपीटरहरू आइपुगे र त्यहाँ रुचि भित्र ध्रुवीकरण थियो (र यो तेर्सो वा ठाडो पनि थिएन!) “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। वास्तविक ह्याम रेडियोले तपाईको स somewhere्केत कतै पुग्न मद्दतको लागि पहाडको टुप्पोमा त्यो चीज प्रयोग गर्नु पर्दैन! रियल ह्याम रेडियो पोइन्ट टु पोइन्ट! "
तर जीवन चल्यो, एफएम र रिपीटरहरूले स्वीकार्यता पाए र सबै हेमल्यान्डमा फेरि एकपटक ठीक थियो।
त्यसपछि प्याकेट रेडियो आइपुगे र त्यहाँ थियो वास्तविक समस्या ... “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। रियल ह्याम रेडियोलाई काम गर्नका लागि त्यस्ता नयाँ फि .्गल कम्प्युटर चीजहरू मध्ये एक आवश्यक पर्दैन। तपाइँको कुञ्जी वा तपाइँको माईक निकाल्नुहोस् र अन्य ह्याम्सलाई ठीकसँग काम गर्न सुरू गर्नुहोस्! "
तर जीवन चल्यो, प्याकेट रेडियोले स्वीकृति फेला पारे र हेमल्याण्डमा फेरि सबै ठीक थियो।
त्यसपछि Digimodes आइपुगे र त्यहाँ अझै झगडा थियो ... “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। वास्तविक ह्याम रेडियो समावेश छैन टाइप गर्दै सन्देश अन्य हम्सलाई - र ती नष्ट भइरहेका कम्प्युटरहरू! रुचिमा के गर्दै छन् पृथ्वीमा? "
तर जीवन चल्यो, Digimodes स्वीकृति मिल्यो र सबै फेरि एकपल्ट ह्यामल्याण्ड मा थियो।
त्यसपछि डिजिटल भ्वाइस मोडहरू आइपुगे र त्यहाँ केहि पनि थिए धेरै गम्भीर असहमति ... “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। वास्तविक ह्याम रेडियो R2D2 जस्तो लाग्दैन! वास्तविक रेडियोले इन्टरनेटको प्रयोग गरी संसारको बिचल्ली बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन, तिनीहरू वातावरणीय प्रसारको प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा हुन्छन्। यो शौकलाई के भइरहेको छ ??? ”
तर जीवन चल्यो, D-STAR र अन्य डिजिटल आवाज मोडहरू स्वीकार्य फेला पर्‍यो र सबै फेरि एकपटक ह्यामल्याण्डमा थियो।
त्यसो भए हामी आज आइपुग्छौं र नेटवर्क रेडियो दृश्यमा आउँदछन् र सबै नरकहरू छोडिन्छन्! “त्यो वास्तविक ह्याम रेडियो होईन। यो हो खेलिरहेको ह्याम रेडियोमा - त्यहाँ कुनै एमेच्योर आरएफ छैन त्यसैले यो हेम रेडियो मात्र होईन। के अधिक छ, मैले मेरो इजाजतपत्रको लागि कडा मेहनत गरें, सबैजनाले हुनुपर्दछ! गलत हिसाबले मानिसहरूले सञ्चारको आनन्द लिन सक्ने हिम्मत कसरी गर्दछ! ”
त्यसोभए के जीवन चलिरहन्छ र के सबै हेमल्यान्डमा फेरि राम्रो हुन्छ?
२१ औं शताब्दीको चुनौती
यसैकारण नेटवर्क रेडियोको आगमनले हाम्रो लागि हम्सको रूपमा यस्तो चुनौतीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ - यसले हामीलाई २०१ and मा र यसभन्दा पछाडिको रेडियो एमेच्योरको अर्थ के हो भनेर पूर्ण रूपमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्दैछ।
र हामीले यी यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ ...
के वास्तव मा एक रेडियो शौकिया परिभाषित?
हामी "एमेच्योर आरएफ" को मतलब के हो?
के यो आरएफ जो कोही एमेच्योरबाट उत्पन्न गरिएको हो?
वा यो आरएफ सरकारले हामीलाई छुट्याएको विशेष ब्यान्डमा उत्पन्न गरिएको हो?
यदि हो भने, के यो त्यस्तो हुनु हुँदैन?
यो अरु केहि हुन सक्दैन?
के यसमा कुनै पनि फरक पार्छ?
हाम्रो ब्यान्ड को बारेमा के?
ह्याम्सको रूपमा हामी हाम्रो ब्यान्डमा धेरै "संलग्न" छौं। यो १ 160० मिटर वा २ मिटर हो, हामीसँग उनीहरूको "स्वामित्व" को मनोवैज्ञानिक भावना छ।
हामीसँग "मनपर्ने" ब्यान्डहरू छन्, हामीसँग ब्यान्डहरू छन् कहिल्यै बारम्बार
हामीसँग "हाम्रो" स्थान फ्रिक्वेन्सीहरू पनि छन् र केही ह्याम्सले केही हदसम्म "दृढ" पाउनेछ यदि उनीहरूको "समूह" मा नभएको सँगी शौकिया। हिम्मत "तिनीहरूको" फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न!
र अझै २१ औं शताब्दीमा, म विश्वास गर्दछु कि ब्याण्ड र फ्रिक्वेन्सीहरूको सम्पूर्ण अवधारणा झन् झन् द्रवी हुँदै गइरहेको छ। किन यस्तो हुने थियो?
प्रसारण रेडियोबाटको एउटा उदाहरण
त्यो धेरै पहिले होइन, हामी लांग वेभ (LF), मध्यम वेभ (MF), छोटो वेभ (HF) र FM (VHF ब्यान्ड II) मा प्रसारण स्टेशनहरू ट्यून गर्न सक्दछौं। स्टेशनहरू बारम्बार आफूलाई फ्रिक्वेन्सीद्वारा उल्लेख गरिन्छ: "२247 मिटर रेडियो १" वा "११1२ एएम" उदाहरणका लागि। यो स्टेशनको पहिचानको अंश देखिएको थियो - धेरैले उनीहरूको स्टेशनको नामहरूमा फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए!
तर आज, हामी यसमा कम सुन्न सक्छौं। जब तपाईं आजका दिन प्रसारण स्टेशनहरू सुन्नुहुन्छ, तिनीहरू फ्रिक्वेन्सीहरू दिने गरिरहेछन् जस्तो देखिन्छ, बरु उनीहरूले घोषणा गरे कि तिनीहरू "एफएम, ड्याब र डिजिटल" मा छन् वा त्यस्तै केही।
किन? किनभने रेडियो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं सायद दुईवटा मध्ये एक तरिकामा उपभोग गर्नुहुन्छ - कि डिजिटल (DAB वा स्याटेलाइट वा समान साधनहरू मार्फत) वा इन्टरनेट मार्फत स्ट्रिमिंग द्वारा। फ्रिक्वेन्सीहरू र विस्तार द्वारा, ब्यान्डहरू उनीहरूसँग त्यति प्रासंगिक हुँदैनन् जुन उनीहरू पहिले थिए।
ठूला प्रसारकहरू पनि "परम्परागत" रेडियोबाट द्रुत रूपमा टाढा जाँदैछन्।
सर्ट वेभमा - केवल केही देशहरू र विभिन्न धार्मिक समूहहरू अब त्यहाँ काम गर्दछन्। ठूला मानिसहरू लांग र मध्यम वेभबाट पनि बाहिर जाँदै छन्। यदि व्यावसायिक प्रसारणकर्ताहरू टाढा जाँदैछन् भने, हामीले किन सोध्यो।
ब्यान्डले फरक पार्छ?
मलाई एक शंका छ कि यो कम्तिमा आंशिक रूपमा हो किनभने ब्याण्ड र आवृत्ति आजको दिन यति धेरै फरक पर्दैन। घरेलु रेडियो उपकरणहरू पुश बटनहरू र स्क्रीनहरूको बारेमा बढी हुन्छ जुन तपाईंलाई तत्काल स्टेशनमा पुग्दछ, फ्रिक्वेन्सीहरूसँग डायल ट्युनिंग भन्दा। यो अन्तिम उत्पादन हो जुन महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छैन यस्तो तरिका जुन यो तपाईंसँग हुन्छ।
म्यान्युअल ट्युनिंग डायलको साथ आजका दिनहरूमा कसले एक आधुनिक प्रसारण रेडियो ट्यून गर्दछ? कोही? यो सबै रेडियोहरूमा मुख्य घुक्खी हो जुन धेरै वर्ष पहिले होइन! म यस ग्रहमा मेरो शुरुआती दिनमा डायलको साथ पुरानो VHF टिभी ट्यूनिंग पनि सम्झन सक्छु - त्यो साँच्चै अब अनौंठो देखिन्छ!
एक कदम अगाडि बढ्दै, धेरै प्रसारण स्टेशनहरू पनि यी सबै दिनमा प्रत्यक्ष आरएफ प्रयोग गरिरहेका छैनन्! हामी अझै पनि तिनीहरूलाई "रेडियो स्टेशनहरू" (वा कहिलेकाँही "इन्टरनेट रेडियो स्टेशनहरू") को रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं।
एक शौक को रूप मा हाम रेडियो को लागी एक समान प्रकारको दिशा मा सशक्त छैन सोच्न के कुनै कारण छ? हेम्सको रूपमा ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो एक शक्ति हो कि हामी नयाँ टेक्नोलोजीहरू अँगाल्न र तिनीहरूलाई आफ्नै प्रयोगको लागि अनुकूल गर्नमा राम्रो छौं।
मैले कुरा गरिरहेको बिन्दु यो हो - मलाई शंका छ कि "ब्यान्ड" र "फ्रिक्वेन्सीहरू" डिजिटल युगमा वास्तवमा यत्तिको ठुलो मुद्दा होइन जस्तो कि हुन सक्छ जस्तै तिनीहरू हुन।
संक्षेपमा, ब्यान्डहरू केवल प्रसारको कारणले अवस्थित छन्।
१ 160०, m० मी, २० मीटर, १० मीटर, २ मीटर आदि सबै वास्तविकतामा, "रेखाको दृश्य" ब्यान्डहरू हुन्। विषयलाई अति सरलीकृत गर्नको लागि, यो आयनोस्फेरिक वा ट्रपोस्फेरिक तहहरू हो जुन दृश्य रेखालाई बढावा दिन्छ र यसलाई अरू केहि बनाउँछ।
प्रत्येक ब्यान्डको परिणाम स्वरूप फरक प्रसार हुन्छ, प्रत्येक ब्यान्डलाई यसको "चरित्र" दिन्छ र केहीको लागि, आफैंमा प्रसारको अध्ययन पनि शौकको एक आकर्षक हिस्सा हो।
मानव निर्मित प्रसार मात्र भिन्न छ
जब हामी (र प्रयोग) को बारे मा सोच्छौं इन्टरनेट मानव निर्मित प्रचार माध्यमको रूपमा (जुन यो हो - यसले संसारभरि सals्केतहरू प्रसार गर्दछ) तब ब्यान्डको अवधारणा बेमानी हुन्छ।
इन्टरनेट एक जस्तो छ, लगभग असीमित चौडा, विश्वव्यापी "ब्यान्ड", लगातार S9 + open० सबै देशहरूमा २ vag/40 खोल्छ केही अस्पष्टताको साथ - र केवल आवाजको लागि मात्र होइन, दर्शन र अन्य डिजिटल मोडहरूका लागि पनि।
त्यस्तो राख्नुहोस्, कसले यसलाई प्रयोग गर्न चाहँदैन? के यसले वास्तवमै फरक पार्छ कि कुन “ब्यान्ड” तपाईं (वा नभएको) मा, यदि त्यहाँ एक हुनुभयो भने?
त्यसोभए "ब्यान्ड" को अवधारणा, जुन हामी मध्ये धेरैले हाम्रो गतिविधिहरू परिभाषित गर्छौं, यो डिजिटल युगमा हाम्रो अगाडि खस्कँदो हुन सक्छ र हामीले यसलाई अहिलेसम्म महसुस पनि गर्न सक्दैनौं! त्यो भन्नुको मतलब हाम्रो ब्याण्ड अझै पनी अस्तित्वमा छैन, वैसे - स्पष्ट रूपमा तिनीहरू गर्छन्। यो मात्र हो कि, धेरै मानिसहरूका लागि, ब्यान्डहरू एक विदेशी अवधारणा हो।
र त्यसपछि के?
जब शobby्की यसको केही प्रभावहरूसँग सर्तहरूमा आउन थाल्छ, अन्य मुद्दाहरू त्यसपछि उठ्न सुरु हुन्छ, जस्तै…
हामीलाई इजाजत पत्र पाउनको लागि केहि परीक्षा चाहिन्छ?
के हामीलाई इजाजतपत्र पनि चाहिन्छ?
यो कस्तो रूप वा फारम लिनु पर्छ, यदि हो भने?
के हामीले नयाँ व्यक्तिहरूको आगमनलाई सोखमा आउँदैछौं किनकि त्यसमा प्रवेश अधिक सीधा छ?
हामी कसरी त्यसको सामना गर्न सक्छौं?
हामी पनि गर्छौं चाहनुहुन्छ नयाँ मानिसहरु आउँदैछन्, विशेष गरी यदि तिनीहरूको विचारहरु हाम्रो भन्दा फरक छ?
यो शौक २० वर्षको समयमा कस्तो देखिनेछ?
हाम्रो "परम्परागत" ब्यान्डलाई के हुन्छ?
म भविष्यमा यसको बारेमा धेरै छलफल भएको आशा गर्दछु - यो वास्तवमै एकदम रोमाञ्चक छ!
कम्फर्ट क्षेत्रबाट बाहिर ...
यद्यपि यसले हामी मध्ये धेरैलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो महसुस गराउँदछ - जमीन हाम्रो खुट्टा मुनि सर्दै छ र हाम रेडियोको परम्परागत रेसन डी'ट्रे परिवर्तन गर्न र अनुकूलन गर्न चुनौतीको लागि पर्खिरहेको छ ...
म यसलाई नराम्रो चीजको रूपमा देख्दिन - बुद्धिमान इमानदार बहसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो दिमाग र हाम्रो सोचाइ खुला राख्नु हो। हामीले केहि अस्वीकार गर्नु हुँदैन किनभने यो नयाँ हो वा यसले हाम्रो रेडियो सामान्यमा कतातिर लागिरहेको छ भन्ने हाम्रो पूर्व धारणा धारणालाई चुनौती दिन्छ।
समान रूपमा, हामीले बच्चालाई नुहाउने पानी बाहिर फ्याँक्नु हुँदैन र परम्परागत ह्याम रेडियोलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन किनकि यो वर्षौं भइसक्यो। आयनोस्फीयर र इन्टरनेट पूरक हो, प्रतिस्पर्धामा होइन।
मेरो आफ्नै राय?
यदि तपाईंले अहिले सम्म पढ्नु भएको छ र तपाईं वास्तवमै मेरो व्यक्तिगत विचारहरू चाहानुहुन्छ भने ...
हामी दुबै संसारको सर्वश्रेष्ठ किन सक्दैनौं? पक्कै पनि हामी सक्छौं।
नेटवर्क रेडियोहरू (कम्तिमा तिनीहरूको विकासको यस चरणमा) प्रतिस्पर्धा रेडियोहरू होइनन्, र इन्टरनेट अझै पनि प्रतिस्पर्धी मैत्री प्रसारको मोड होइन। (त्यो पक्कै परिवर्तन हुन सक्छ!) त्यसैले प्रतिस्पर्धी अझै पनि परम्परागत ह्याम ब्यान्डमा उत्तम छ। म तिमीलाई meters० मीटरमा देख्छु - 80 59 ०१ ओम…
यद्यपि, नियमित भरपर्दो विश्वव्यापी उच्च-गुणस्तरको सम्पर्कहरू केवल एक चीज नै नेटवर्क रेडियोमा उत्कृष्ट हुन्छन्, त्यसो भए किन त्यसो नगर्ने जब तपाईं चाहानुहुन्छ (वा जब एचएफ ब्यान्डहरू हल्लाले भरिएका छन् वा अन्यथा मरेका छन्)? म गर्छु! म शौकमा छनौटको विस्तारलाई खराब चीजको रूपमा देख्दिन।
आनन्द कुञ्जी हो
के तथ्य यो छ कि म सेलुलर फ्रिक्वेन्सीमा 800०० मेगाहर्ट्ज, 900 ०० मेगाहर्ट्ज, १1800०० मेगाहर्ट्ज, २१०० मेगाहर्ट्ज वा वाइफाइमा २.2100GHz वा GGHz मा प्रसारित गर्दैछु? के त्यहाँ आन्तरिक रूपमा केहि खराब छ? उदाहरणका लागि २१ मेगाहर्ट्ज वा 2.4 5२ मेगाहर्ट्जको उपयोग गर्न के त्यहाँ अधिक सद्गुण छ? तिनीहरू केवल पछि "फ्रिक्वेन्सी" हुन्।
म आफैं मेरो स्थानीय रेडियो क्लबको आदर्श वाक्य अनुसरण गरेको हेर्न चाहान्छु, "RF संग मजा लिदै"। चाहे म नेटवर्क रेडियो को उपयोग गर्न को लागी वा Yaecomwood सुपर-डुपर बेस स्टेशन मलाई को लागी प्रासंगिक छैन। रुचि को मजा सबै कुरा हो, अन्यथा किन शौक छ?
यो बहस जुनसुकै तरिकामा जान्छ र जुन दिशामा यो ठूलो शौक लिन्छ, मेरो लाइन राख्दछ सबै को समृद्धि हरेक रुचि को पक्ष।
अर्को शब्दहरु मा, यो टुक्रा को शीर्षक मा फिर्ता जान र परिवर्तन गर्न को लागी एक शब्द, “यो हो सबै 'वास्तविक' ह्याम रेडियो ”
प्रकाशित मार्च 1, 2018 मार्च 1, 2018
संरक्षित: टकपड N58 फर्मवेयर अपडेट २०१०20180301०१